रेनो सर्भिस क्याम्प अब तपाईंको शहरमा | Ratopati
रेनो सर्भिस क्याम्प अब तपाईंको शहरमा
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ७, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । रेनो नेपालको लागि आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटो मोबाइल्स् प्रा. लि. ले आफ्नो उपभोक्ताको सुविधाको लागि ‘रेनो सर्भिस क्याम्प’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
साउन ६ गतेदेखि ल्याएको यो सर्भिस क्याम्प साउन ८ गतेसम्म नेपालका विभिन्न शहरहरुमा आयोजना हुनेछ । जसमा उपभोक्ताले आफ्नो गाडीको उत्कृष्ट सर्भिस सेवा पाउनेछन् ।
रेनोले यो सर्भिस क्याम्पको थिम ‘गिभ योर कार दी बेस्ट केयर’ राखेको छ । जसले ग्राहकलाई पूर्ण सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा र सुविधा दिनेछ । यसबाट बिक्रीपछिको सेवामा रेनोको उपस्थिति बलियो हुने कप्नीले विश्वास लिएको जनाएको छ ।
यो सर्भिस क्याम्प नेपालका मुख्य शहरहरुमा सञ्चालन हुनेछ । जसमा शाहारा अटो मोबाईल्स एण्ड कम्पनी प्रा.लि. बिर्तामोड झापा (साउन ६ गते देखि ८ गतेसम्म), महाविर अटो मोबाइल्स विराटनगर (साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म), युनाइटेड अटो कन्र्सन नारायणगढ (साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म), जुपिटर ह्वल्स बुटबल (साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म), भैरहवा अटो कम्पनी भैरहवा (साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म) र जोन्छेन ट्रेर्डस पोखरा (साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म) यी आयोजना हुँदैछ ।
यो सर्भिस क्याम्पमा सहभागि हुने ग्राहकले विभिन्न छुटका सुविधाहरु पाउनेछन् । जसमा निःशुल्क लेबर चार्ज, १५ प्रतिशत लुब्रिकेन्टमा छुट, एसीमा २०० जिएम रिफिलिङ निःशुल्क, स्पेयर पार्टस्मा १० प्रतिशत छुट, निःशुल्क भेइकल चेकअप, धुलाई र कोलेन निःशुल्क दिइनेछ ।
खुसी कसरी हुने ? सद्गुरुले दिए यस्तो जवाफ
बागबजारबाट नक्कली नोट बनाएर ठगी गर्ने पक्राउ
प्रतिवर्ष ०.०५६ सेल्सियसले बढ्दै नेपालको तापक्रम